‘जागीर खान्छु होइन, दिन्छु भन्ने मानसिकता राखौं’ | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले मेहनतले नै सफलता हात लाग्ने बताएका छन् । उनीहरुले जागिर खोज्ने भन्दा पनि जागिर दिन्छु भन्ने मानसिकता नभएसम्म स्वरोजगार बन्न नसक्नेमा पनि सहमति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना महासंघ गण्डकी प्रदेश तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा पूर्वमिस नेपालहरूको संयोजनमा भएको युवा सम्मेलनमा उनीहरुले आफ्ना कथाहरु पनि सुनाए ।
नेतृत्व, नविनतम् सोच र व्यवसायबारे हुने छलफलमा पोखरा विश्वविद्यालयक पूर्वडीन प्रा.ा. दीपक भण्डारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रलयका सहसचिव महेन्द्र पौेडेल, युजि केककी प्रमुक कार्यकारी अधिकृत निकिता आचार्य र महिला उद्यमी मिलन थापा सहभागी थिए ।
कार्यक्रम संचालिका पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै युजी केककी संचालिका निकिता आचार्यले भनिन्,‘१० वर्षको उमेरमा मैले साथीसँग मिलेर जम्मा २० हजारको लगानीमा व्यवसाय शरु गरेको हो, पछि त्यसमा थप्दै गएको हो ।’ उनका अनुसार अनलाइनबाट केक बेच्न सकिन्छ र ? भन्ने आशंकाका बीच सुरु गरिएको व्यवसायले नै उनलाई परिपक्व बनायो रे ।
पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व्डिन प्राध्यापक डाक्टर दीपक भण्डारीले सरकारको नीति नै युवाहरुलाई व्यवसायमा हात हाल्न निरुत्साहित पार्ने खालको भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार बैंकहरुले सुरुमा ऋण दिने र पछि ब्याज बढाउँदे जाँदा पनि धेरै व्यवसायहरु बन्द भएको बताए । व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति नराख्नाले पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो ।
महिला उद्यमी हिमालय अटो वल्र्डकी संचालिका मिलन थापाले व्यवसायमा सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । उनका ग्राहकसँग मिजासिलो व्यवहार गर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने व्यवसायमा सफलता हात लाग्छ ।
यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रलयका सहसचिव महेन्द्र पौेडेलले नेपाल सरकारले युवाहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा दिनका लागि सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएको जानकारी दिँदै व्यावसायिक कृषिका लागि ५ करोडसम्म कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार त्यस्तो कर्जाको ५० प्रतिशत ब्याज पनि सरकारले नै ब्यहोर्नेछ ।
‘सफलता भनेकै व्यवस्थापन’
युवा व्यवसायी वैभव पौडेललाई नपुग्दो केही थिएन । स्कूल र कलेजका दिनमा उनले कुनै काम गरेनन् । तर, मनै त हो। उनी अमेरिका भासिए । काम नगरि खान नपाइने । उनले सुरुमा रेष्टुरेण्टमा जागिर खाए । काम थियो, भुईँ पुछ्ने । कामकै क्रममा उनले डिपार्टमेण्टल स्टोर्स, पेट्रोल पम्पमा पनि पसिना बगाए । ‘ग्याँस स्टोरमा काम गर्दा धन्नै एक जना कालाले पेस्तोल हानेनन्’, उनी भन्दै थिए, ‘एकपटक त मैले उसैको पेस्तोल खोसेँ ।’ सन् २०११ तिर अमेरिकी ग्रिनकार्ड र पासपोर्ट बन्दै गर्दा उनी नेपाल फर्के । पिता र दाजुले चलाएको बाराही होटल थिँदै थियो तर उनले छुट्टै ब्यञ्जन रेष्टुरेण्ट खोले ।
‘ब्यञ्जन खोलेपछि म आफै त्यहाँ प्लेट उठाउने र भुईँ पुच्छने काम गर्थेँ’, उनले भने, ‘त्यो देखेर कामदारहरु पनि अचम्म मान्थे ।’ उनको व्यवसाय बढ्दै गयो । पछि बगैँचा वेलनेस रिसोर्ट खोले । मन थामिएन । बगैँचाको नाममै बगैँचा कार स्पा, बब्स जिम पनि खुल्यो । अहिले उनी लेकसाइडको पामेतिर बिच रिसोर्टको तयारीमा छन् । आफ्नो व्यावसायिक सफलताको कुरा सुनाउँदै गर्दा उनले नेपालमा अवसर नै अवसर भएको तर अवसरलाई हेर्ने आँखा नभएको टिप्पणी गरे । बैंकहरुले युवाहरुलाई बिना धितो ऋण दिने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा पनि उनले सुनाए ।
यता आफ्नो सफलताको कथा सुनाउँदै अग्रज पर्यटन व्यवसायी लक्की कार्कीले आफैले भोगेको कुरालाई पनि व्यवसाय बनाउन सकिने धारणा राखिन् । ‘बजारमा तपाईँले भोगेको समस्या अर्काले पनि भोगेको हुन सक्छ’, उनले भनिन्, ‘वास्तवमा सफलता भनेकै व्यवस्थापन हो ।’ उनका अनुसार मान्छेसँग धेरै रोजाईहरु भयो भने पनि समस्या आउन सक्छ । ‘त्यसले तपाईँहरु जे पाउनुहुन्छ त्यो काम गरिहाल्नुहोस् तर निर्णय भने मनले गर्नुहोस् ।’ उनले पर्यटनमा अथाह सम्भावना भएको बताउँदै पर्यटनमा लाग्नेहरुले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सेमिनारमा युवा र अर्थशास्त्र विषयमा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेल, युवाहरुलाई डिप्रेसनबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने विषयमा कञ्चन रावत, शारीरिक सुन्दरताबारे पूर्व्मिस नेपाल प्रीति सिटौला, सामाजिक अपराधअन्तर्गत एसिड आक्रमणबारे अभियन्ता उज्वल थापाको प्रस्तुति रहेको थियो । यसैगरि साइबर बुलिङबारे पूर्वमिस नेपाल जेनिसा मोक्तानले बोलेकी थिइन् भने नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा गरिने व्यवहारबारे पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशीले आफ्ना धारणा सुनाएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले युवाहरुमा सकारात्मक सोचको विकास गराउन तथा उद्यमशीलताबारे जानकारी दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सामाजिक सेवा फोरमका अध्यक्ष जय सिवाकोटी र पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले पनि बोलेका थिए ।